Bahrain: Marobe ireo tranonkala voakatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2018 4:07 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, polski, English
Marobe ireo tranonkala nakatona tao Bahrain taorian'ny famoretana vaovao nataon'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao. Nahatonga ireo tranonkala tahaka ny Google Translate sy ny tranonkala ara-tsosialy, ara-pivavahana, momba ny zon'olombelona sy ny vondrona ara-politika ho tsy azo nidiran'ny olona tao Bahrain intsony ny fanakatonana farany.
Nakatona tao Barhain ihany koa ny tranonkalan'ny Bahrain Human Rights Society, izay nanome ireto lisitra manaraka misy ireo tranonkala nakatona:
BCHR mitanisa ireo tranonkala nakaton'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao ao Bahrain.
Bilaogera Ali7 manoratra:
Ary nanontany tena aho hoe nahoana ny olona rehetra no miantso ahy manontany momba ny proxies?
Izany dia mandra-pahitako fa tranonkala am-polony no nakatona nandritra ny alina tamin'ny alalan'ny hafatra sivana kanto (izay misy ny nomeraon-telefonina sy ny laharana fax amin'ny fanadihadiana ary ny hafatra izay nahitana hafatra voaràra efa nofafana.) Mahatonga anao hahatsapa fa tsaratsara kokoa raha mandràra Andriamanitra ny zava-dehibe amin'izy ity. Ny vokatra farany dia voasivana ireo tranonkala ara-politika fantatra rehetra sy ireo fomba rehetra ahatongavana amin'izy ireo ary ireo sehatra rehetra misy ny teny hoe proxy ao amin'ny adiresin'izy ireo – eny fa na dia ny tranonkala akafizintsika hidemyass.com aza.
Lasa mihaika ny fanakatonana mihitsy aza i Ali7 ary nilaza hoe:
Ary farany… te-hilalao saka sy totozy amintsika ve ny minisitera? Ataovy izany!!
Tao amin'ny Facebook, bilaogera Bahrainita Manaf Al Muhandis, izay mibilaogy ao amin'ny TheRedbelt.com namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe: Censored Internet in Bahrain: Imprisonment of Speech (Aterineto voasivana ao Bahrain: Fanagadrana ny fitenenana):
Azoko antoka fa maro aminareo no mahafantatra ny ezaky ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao handràra tranonkala. Heveriko fa miombon-kevitra isika rehetra fa tsy azo ekena izany, tsy azo atao, ary milaza fotsiny hoe: TSY ARA-DALANA satria mifanohitra amin'ny lalàna Barhainita izay miaro ny fahalalaham-pitenenana izany.
Vondron'olona iray no nanandrana niala tamin'izany tamin'ny fampidirana ny Fehezan-dalàna Etika Manohitra ny Fankahalàna (http://www.bahraincodeofethics.com) ary misafidy kokoa hoe toriana eny amin'ny fitsarana izay tranonkala manitsakitsaka ny lalàna rehetra ary mahazo soloina tena fa tsy mampiasa ity fomba efa lany andro sy tsy mahomby ity.
Na efa nanao sonia ny fehezan-dalàna ianao na tsia, miangavy anao aho hanoratra momba ny raharaha ao amin'ny bilaoginao. Tokony hampiray ny herintsika ihany koa isika mba handrenesana ny feontsika. Azontsika atao ny manao famoriam-bahoaka na mandefa taratasy fanoherana mitondra ny soniantsika. Manasa anao aho mba hanome torohevitra misimisy kokoa momba izay azontsika atao momba izany.